Mmekọrịta Sagittarius | Zodiac & Horoscope Ndakọrịta - Ihe Ịrịba Ama Zodiac
Mmekọrịta Sagittarius: Na &hụnanya & Na Ihe Ndina
Ndakọrịta nke Sagittarius:
Na &hụnanya & Na bed
Sagittarians nwere ike ituputa shebang nke otu ihunanya!
Nke ahụ apụtaghị nke ọma.
Anyị apụtaghị na ụdị oriri oriri.
Ọ DỊ MMA. Anyị mere ọfụma. Ka emechara, a bu Sagittarius anyị na-ekwu maka ya.
Ihe ịrịba ama Zodiac a anaghị ahụ n'anya nke ukwuu ka ha 'na-achụ nta' ya. Ozugbo Sagittarius ahụ hụrụ apụl nke anya ha, ha na-enwu isi ọnụ akụ ha ma ka anyị ‘eruga!
O siri ike ka ha ghara ihie akara ha ma ozugbo Sagittarius nwere ihe ha lekwasịrị anya gị Maazị ma ọ bụ Nwada Apple, ị nwere ike jegharịa na shuga ma jide ihe ọ drinkụ drinkụ n'ihi na ị ga - abụ onye na - ahụ maka ọkụ '!
Oh, anyi agwaghi gi?
Sagittarians mepụtakwara ilee…
Sagittarius Banye Isiokwu Ndị Dị na Magazin A
Eziokwu & Mkpakọrịta Metaphysical
Comphụnanya dakọtara na akara iri na abụọ nke Zodiac
Sagittarius na .hụnanya
Onye na-agba ụta na-adaba ma na-ahụ n'anya ozugbo ụfọdụ gbanwere sọks. Mgbe ị na-achọ onye ị hụrụ n'anya, ị ga-eji ịnụ ọkụ n'obi mee ya. Love hụrụ asọmpi dị mma n'anya ma merie onye ọ bụla na-ele anya ma 'nọrọ' asụsụ ahụ na-eme ka ọbara gị gbaa.
Ndị gị na Sagittarius na-emekọ ihe na-achọpụta ngwa ngwa gị joix de vie - ajọ ọchị, ebumnuche na ikike gị ịmepụta ihe okike.
Ha na-achọpụtakwa onye, ​​n'ime ala, na-enwe mmetụta ụjọ maka ọrụ na ntinye.
O doro anya na ị hụrụ ihe obi ụtọ ịchụ nta ahụ n'anya, mana usoro nke onwe gị na-egbochikarị iwere nnukwu ọdịda ahụ n'ọnọdụ ogologo oge. Dochọghị ka ọnyà sie gị ike na ịlụ di ma ọ bụ nwunye, ma nwee ike ịhọrọ mmekọrịta na-emeghe iji mee ka ihe dị ọhụrụ.
Enweghị ekworo na-amasị ndị di na nwunye dị iche iche, yana ike gị ịgbaghara ọbụnadị ekwenyeghị na dallian.
Na egwuregwu mkpakọrịta nwoke na nwanyị ị bụ Star Sign mgbe niile na-agagharị. N'ezie, ị n'ebumnobi mepụtara usoro ihe ịma aka na-enwe olileanya ịchọta onye ga-anagide mmegharị gị na-adịgide adịgide.
N'ọtụtụ oge ị naghịdị eme atụmatụ, ị na-eji aka gị ewepụta echiche ma soro ya na-agba ọsọ. Nke ahụ nwere ike ime ka o siere ndị nwere ike ịmekọrịta ike ike, mana ọzọkwa nke ahụ bụ nzube niile nke ule gị.
Ndị na-anọ n'azụ agaghị emeri n'ọsọ ahụ maka obi gị.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Sagittarian egbula ịchụ ya. N'ezie, ịlaghachi ngwa ngwa bụ ihe na-adọrọ adọrọ karị. Ọ bụ mgbe ahụ ka Onye na-agba ụta na-ewepụta saịtị, buru n'uche wee hapụ akụ ịhụnanya. Ọ bụ ezie na egwuregwu a nwere ike iyi obere ụmụaka ọ bara uru.
Ọ bụrụ na Sagittarius gị anaghị achụ gị, ị nwere azịza gị. Ọ bụrụ na ha achụ, otu n'ime akara ngosi kacha hụ n'anya na Zodiac ga-ekpochapụ gị n'ụkwụ. Otu oge na mmekọrịta ahụ mee ka ikuku nke ihe omimi na-aga. Debe ihe nzuzo nzuzo kemkpa kemịkalụ n’okpuru okpu gị ma gosi ya Onye na-agba ụta ume gị na ikike ịmegharị ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị mushy ma nwee ike ịkwa ákwá, nọrọ ebe dị anya n'ihi na Sagittarian kpọrọ nkụ asị.
Greatfọdụ nnukwu ọrụ na-etinye aka na Archer na-aga n'ihu na-agụnye nri zuru ụwa ọnụ, ụdị nkà pụrụ iche na njem na-enweghị isi na mba ọzọ.
Mgbe ị nwere ike ime ka Sagittarius gị nọdụ ala, tinye ha na mkparịta ụka miri emi banyere akụkụ nke mmasị ya. Debe njedebe nke mkparịta ụka gị, gosipụta nkwanye ùgwù nye onye ọ bụla gbara gị gburugburu ma mee ka ọkpụkpụ na-atọ ọchị!
Ga-achọ nkà a niile iji mee ka Onye na-agba ụta a na-emeghe obi ụtọ.
Sagittarius na Ndina
Ọ bụrụ na ị na-achọ onye na-ekpesi ike ike hụrụ anya ọzọ. Ọ bụ ezie na Sagittarius nwere ike ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-enwe mmetụta uche n'ihe ndina, ha maara n'ezie etu ha ga-esi gbanye amara na agụụ mmekọahụ. Dịka onye Sagittarian ị na-ahụ ka ịhụnanya na-atọ ụtọ nke ukwuu mana ị na-achọ ihe dịgasị iche iche maka ose ahụ.
Nọgidere, megharịa arụmọrụ nke otu ọnọdụ ochie ahụ abụghị maka gị! Mana maka onye ọlụlụ dị njikere ịnwale ị ga - enye nka nke ga - eme Scorpio! Anụ ọhịa na ebube chịkọtara ihe ịchọrọ site na mmekọahụ. Enwere obere ihe dị 'n'ebe ahụ' maka Onye na-agba ụta.
Ahụhụ ga-adịrị onye òtù ọlụlụ nke na - enweghị ike iso gị - nke ahụ bụ ihe na - emebi.
Dị ka onye òtù ọlụlụ nke Sagittarius ị ga-ahụ na ha na-eji nwayọ nwayọ, nke aghụghọ.
Nke a abụghị maka ịmalite ọkụ ọkụ, ọ bụ ịmalite ịmalite ọkụ ole na ole na iwu ụlọ ruo mgbe unu abụọ ga-enwu ọkụ.
Niile echiche efu ndị ị nwere?
Jiri Sagittarius gị nyochaa ha ma ị ga - ahụ ihe ezigbo nlebara anya na - adị. Ya mere ọ bụrụhaala na ịhụnanya gị na-eme bụ a 50-50 okwu na okwu nke enyịn, a Ihọd ma ọ bụ gal nwere ike mkpatụ gị ụwa na dum ọhụrụ ụzọ.
Dị ka egwuregwu egwuregwu mkpakọrịta nwoke na nwanyị, ụzọ kachasị mma iji nweta Onye na-agba ụta n'àkwà bụ ime ka ọ bụ ihe ikpeazụ n'uche gị. Kama nke ahụ, kpọga ha n'èzí maka ịgagharị ogologo ma ọ bụ ụdị mmega ahụ.
Zere isiokwu dị arọ na ihe ọ bụla na-esi ísì ụtọ.
Ọ bụrụ na ị nye Sagittarius nnwere onwe ịchụ nta gị, ha ga-enwe mmekọahụ maka njiri mara mma nke na-eme ka ị laghachite ọzọ.
Eziokwu Sagittarius & Mkpakọrịta Metaphysical
Bọchị: Nọvemba 23- Disemba 20
Akara: Onye na-agba ụta
Isi Okwu: 'Ahụla m'
Mbara ala: Jupita
Nkume ọmụmụ: Citrine (Nọvemba) ; Blue Topaz (Disemba)
Ọmarịcha nọmba Ihe omuma: 3
Ifuru: Narcissus & Dandelion
Agba: Ìhè Blue & Pọpụl
Chakra: Anyanwụ Plexus (Manipura)
Zodiac Twin nke China: Oke
Zodiac Twin nke na-atọ ọchị nke Chinese: Oke
Rottù Kaadị Tarot: Ọnwụ (Sagittarius), Ndagharị nke Fortune (Jupita)
Kristal Healing: Amber, Chrysocolla, Imperial Topaz, Jasper, Malachite , Moonstone , Tourmaline, Turquoise
Onye a ma ama Sagittarius: Jimi Hendrix, Ms M. Bette Midler, Mark Twain, Frank Sinatra, Walt Disney, Brad Pitt
leo nwaanyị na sagittarius nwanyị ndakọrịta
Mmekọrịta Sagittarius na ihe ịrịba ama Zodiac iri na abụọ niile
Aries na Sagittarius
Sagittarius na Aries are bụ ezigbo egwuregwu maka ibe gị!
Dị ka gị, Aries hụrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'anya, nwee ọdịmma dịgasị iche ma na-enwekarị ọ justụ ịnọdụ ala na ikwu okwu ọtụtụ awa na njedebe. Nanị nsogbu nwere ike ịdị ebe a bụ na ihe ịrịba ama abụọ a nwere iwe ọsọ ọsọ.
N'okwu dị mma karị, ị gaghị ewe iwe na ibe gị ogologo oge tupu ị gachaa isusu ọnụ na akwa.
leo nwoke na Virgo nwanyi ndakọrịta
Taurus na Sagittarius
Nke a bụ obere oge gwakọtara arụmụka. Dị ka Sagittarius mmụọ gị na-enweghị onwe gị na-ahụ Taurus dị oke egwu na ụzọ isi mee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile. Kwesịrị ịpụ n'èzí ma kpọọ egwu ma ị nwere àgwà ikwu naanị ihe na-ezighi ezi n'oge na-ekwesịghị ekwesị (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịge ntị na Bull).
Isi ihe abụọ a na-alụ ọgụ bụ otu ihe ga-eme ka olileanya ọ bụla nwee mmekọrịta: ego. Bull bụ oke mgbanwe mgbe ị nwere uche na ị, 'enweghị ike iwere ya.'
Gemini na Sagittarius
Nke a bụ mkpụmkpụ akpọrọ mkpokọta.
Gị abụọ maara otu esi eme pyrotechnics n'ime ime ụlọ n'echiche na obere egwuregwu. O di nwute na ị makwa otú e si na-alụ ọgụ aghara aghara.
Ọ bụrụ na ịnweghị mmekọahụ ị na-etinye na nkwukọrịta ọzọ snafu.
N’ikpeazụ nke a na-agwụ ike ma gị abụọ agawa (ma ọ bụghị n’enweghi ekpori ndụ na mbụ).
Ọrịa cancer na Sagittarius
Oscar Wilde kwuru otu oge, 'ezi ndị enyi na-egbu gị n'ihu'. Nke ahụ bụ eziokwu banyere duo a.
Nwere ike ịchọta ibe gị ịmata na enwere ikuku nke mmekọahụ, mana maka akụkụ ka ukwuu, unu abụọ 'enwetabeghị' ibe gị.
Onye na-achị Ọrịa Cancer, Ọnwa, na-akụda mmetụta ha mgbe Sagittarian na-achọ ịpụ n'ụlọ mgbe ihe na-eme morose.
Nọgide na mmekọrịta mmekọrịta dị fechaa na njikọ a.
Leo na Sagittarius
Y’oburu n’acho ihe omuma nke ndu gi kari igo Leo!
Ihe ịrịba ama abụọ ahụ nabatara nnwere onwe ma hụ ndị ọhụrụ n'anya, ebe na ihe dị iche iche. Y’oburu na odi uzo diri unu abuo ka unu gha njem ndu unu nile, igha enweta obi uto.
Ọbụna na enweghị nke a, agbanyeghị, mmụọ Sagittarius gị maara nke ọma otu esi erute Leo na ọkwa miri emi, na-eme ka Leo dị mkpa nke onwe ya ma mee ka gị na gị rukwuo nso.
Nanị ihe anyị nwere ike ikwu bụ: Inwe ọmarịcha oge!
Virgo na Sagittarius
Bọọlụ kristal anyị na-ekwu na nke a bụ mmekọrịta jọgburu onwe ya. Gị abụọ bụ dị ka dị iche iche ndị mmadụ.
See na-ahụ onye gị na Virgo ibe gị ka ọ bụrụ onye isi na starchy, ka a ghara ịkọwa ya maka mkpụrụ obi gị Sagittarian.
O doro anya na unu abụọ nwere ike inwe mkparịta ụka dị ukwuu, mana karịa nke ahụ, unu ga-akpasu ibe ha iwe dị ka ájá ájá na-acha anwụ.
Mafere nke a.
Libra na Sagittarius
Nke a nwere ike ịbụ ntụgharị dị ịtụnanya nke akara aka. Ihe omumu nke Libra na-adi gi nma, udiri ya na omume obi uto. Ka ọ dị ugbu a ị na-arata na Libra site na mgbapụ gị na akụkọ sitere na ya (ụfọdụ n'ime ha bụ tad na-emebiga ihe ókè mana Libra anaghị eche echiche - ha na-ahụ ọrụ nka na ịgwa ya).
May nwere ike ịnọ na obere ụlọ gị na Libra gị karịa ka ị na-emebu, mana ọ bara uru n'ihe gbasara ezigbo onye inyeaka na onye hụrụ n'anya.
Scorpio na Sagittarius
Mmekọrịta a na-agbanwe ma na-akwụ ụgwọ. O yighị ka ọ ga-eme gị abụọ ihe ọma ọ bụla.
Dị ka Sagittarius ị ga-enwe mmetụta ọsọ ọsọ nke Scorpio na-agbaji oge ị na-awagharị oke. Ebe dị anya ahụ na-azụ anyaụfụ nke Scorpio.
Ọ bụrụ na nke ahụ adịghị njọ, Scorpio gị enweghị mmetụta nke ịda ụra na akwa. Pụtara, Scorpios sizzle na Sagittarians romp. Scorpios nwere agụụ mmekọahụ siri ike nke na-achịkwa oge na oge ọzọ na-eme ka ọ dịrị gị ka ị tọrọ atọ.
Ọ dịghị mma. Gaa na.
Sagittarius na Sagittarius
E nwere esemokwu ụfọdụ na obodo Astrological iji mara ma njikọ Sagittarius-Sagittarius ga-ere ọkụ ma ọ bụ na-agba ọkụ.
Ee, ha abụọ ghotara na ọ dị mkpa inwe nnwere onwe na obi ụtọ mana mkpụrụ obi abụọ na-atụ egwu ntinye onwe ha anaghị adị nke ọma na eziokwu.
Nhoputa anyi? Enwerekwa ọdịmma ndị ọzọ karịa mmekọrịta ahụ ka ihe wee dị ire.
Capricorn na Sagittarius
Ọ dịghị onye na-enweta afọ ojuju na njikọ a. Capricorn na Sagittarius ga-ekpochi mpi site na ịwụ elu.
Anya Sagittarian gị na ndụ na-eme ka Capricorn lee anya na ascorbic.
Na-arị elu na ndụ mgbe Capricorn na-ewe ụzọ nwayọ nwayọ ma kwụ ọtọ ebe ha kwenyesiri ike na ụkwụ. Na mgbakwunye ọ dị gị ka Capricorn gị ọ ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị gara ebe obibi ndị mọnk ebe ọdịmma mmadụ na-anaghị adọpụ uche gị na ha.
Nke a bụ naanị mmeri na-enweghị mmeri na-enweghị ezigbo ihe bara uru na chaatị gị.
Aquarius na Sagittarius
Nke a bụ mmekọrịta bara uru ịkụ nzọ na. Ọ bụ ezie na ọ na-ewe Aquarius na Sagittarius obere oge iji zụlite mmetụta miri emi maka ibe ha, ha yiri ịbịa n'enweghị nrụgide ma ọ bụ mkpa.
Gị na Onye na-eburu mmiri ma ka esi ebi ndụ, ọ bụrụ na ị ga-ahụ nnukwu ihe ndị ahụ ọnụ, ọ ka mma. N'elu akwa ka unu abuo puru iche ma nwekwaa mmasi icho ihe ohuru.
Nke a abụghị ịhụnanya ho-hum na-eme n'ụzọ ọ bụla. Kporie!
Pisces na Sagittarius
Na mbu mmekọrịta a gbasara oke mmekọahụ, nke dị mma ma dịkwa mma.
Ka o sina dị, ịchọta Pisces na-eme ihere ma dabere na mmasị gị. Ọzọkwa, ndị Sagittarians enweghị nzacha n'ezie ma na-agbasapụ ihe ndị ga-emerụ Pisces ahụ dị nro.
Nrọ nke Azu nke ezigbo di ma ọ bụ nwunye mgbe ị nwere obi ụtọ ịbụ enyi na uru.
Na mgbakwunye, ị naghị achọ onye gị na ya ga-ebi ndụ (ma ọ bụ yabụ ị chere) yabụ ọfụma mmekọrịta a na-arịọ n'isi.
sagittarius nwoke na aquarius nwanyi na akwa
scorpio nwoke na aquarius nwanyị na akwa
sagittarius nwoke na nwanyi pisces na akwa
Virgo nwoke scorpio nwanyi n’anya
leo nwoke na sagittarius nwanyi ndakọrịta